Hirphaa Disaasaa: nama jireenyaa isaa guutuu Oromoof hidhamaa jiru – Oromedia
Home » Seenaa » Hirphaa Disaasaa: nama jireenyaa isaa guutuu Oromoof hidhamaa jiru
Obbo Hirphaa Disaasaa jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu tti nama dhalate guddate dha. Ob Hirphaan jireenyaa isaa guutuu hidhamuun dabarse. Namni keessaa nama tokkoo Qabsoo Oromoo keessaatti nama gahee guddaa qabu fi quqama saba isaatiif rakkoo guddaa nama argee dha.
Obboo Hirphaan dhalootuma isaa irraa jalqabee nama bilisummaa Oromoo barbaaduu dha. Akkaa lakk. warraa Habashaati Bara 1979 kaasee sababa quuqama saba isaatiif mana hidhaa Gimbitti hidhame ture. Obbo Hirphaan ABOttis yakkamee hidhamee ture. Bara tokko keessa yoo xinnaate si’a 3 ol hidhamaa ture.
Ergasii booda hanga har’aatti Gimbii fi Manasibuu Mandiitti kampii waraana keessati yeroo hedduu hidhame dararamaa ture; waajjira poolisi naannoo Gimbitti mootummaa Dargii fi wayyaanee hidhamaa ture.
Yeroo hunda yakka kam irraa illee bilisa ta’ee ba’aa ture. Obboo Hirphaan abbaa ijoollee 8 yoo ta’u guyyaa tokko ijjoollee isaa waliin jireenyaa gammachuu hin dabarsiine. Umuri isaa fi jireenya isaa mana hidhaati babarse.
Obboo Hirphaa Disaasa sababa Oromoo ta’eef jechaa rakkoo fi darara akkanaa ulfaatu argaa jira. Bara duluummaa keessaa dukkana mana hidhaa keessatti mootummaa wayyaanee dhan dararamaa jira.
Obbo Hirphaa Disasa reebichaa fi hidhaa darara bara jireenyaa isaa irratti rawwateef takka gootummaa isa irraa booda hin deebine. Haar’aas Ummata Oromoo kumaatamaa waaliin Rakkoo mana hidhaa hirmachaa jira. Yeroo ammaa kana mana hidha Maaykalaawwiittii dararamaa jira. Seenaa obbo Hirphaa irraa guddaa isaa yeroo itti aanutti isiinin gahaa. Gooti keenyaa kana Galmee Seenaa Oromoo ni yaadatti!
Oftana Jifar Debele tiin.
Previous: Tarkaanfii fudhatamu, kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesu ta’uu qaba